महँगी नियन्त्रणमा, आयात बढ्यो, निर्यात घट्यो Bizshala -
महँगी नियन्त्रणमा, आयात बढ्यो, निर्यात घट्यो
काठमाण्डौ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको माघ महिनामा महँगी घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनबाट महँगी घटेको देखिएको हो।
प्रतिवेदनमा यो वर्ष माघमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७० प्रतिशतमा सीमित बनेको छ। गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.८७ प्रतिशत रहेको थियो। यो हिसाबले मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशतले घटेको छ।
समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.०२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.४४ प्रतिशत रहेको छ। २०७६ माघको तुलनामा २०७७ माघमा फलफूल, घ्यू तथा तेल, दाल तथा गेडागुडी र सुर्तिजन्य वस्तुहरु उपसमुहको मूल्यवृद्धि क्रमशः १८.८४ प्रतिशत, १८.१४ प्रतिशत, १०.४१ प्रतिशत र १०.४१ प्रतिशत रहेको छ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु. १०१ अर्ब ९० करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु. १०६ अर्बले घाटामा रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. २१ अर्ब ६१ करोडले बचतमा रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६९ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल वस्तु आयात ०.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८०३ अर्ब ६४ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३.६ प्रतिशतले घटेको थियो।
निर्याततर्पm सुख्खा बन्दरगाह, विराटनगर, कैलाली, तातोपानी, कन्चनपुर र रसुवा भन्सार कार्यालय बाहेकका नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ। आयाततर्पm भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, कृष्णनगर, कैलाली र कन्चनपुर भन्सार कार्यालय बाहेकका नाकाबाट भएको आयातमा ह्रास आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ०.७ प्रतिशतले घटी रु. ७३३ अर्ब ७३ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ५.३ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.१ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५६७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो।
राष्ट्र बैंकले बढायो अक्सिजन सिलिन्डर आयातमा टीटीको सीमा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अक्सिजन सिलिन्डर आयातका लागि...
महँगी घट्यो, विप्रेषण १६.५%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको चैत महिनामा महँगी घटेको...
भोलिसम्म चौथो संस्करणका कतारी रियाल साटिसक्नुपर्ने,
काठमाण्डौ । चलनचल्तीबाट हटाउन लागिएको चौथो संस्करणका कतारी रियाल...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। कोरोना कहरबीच बैंकिङ प्रणालीमा...
अब लघुवित्तहरुले पनि एनएफआरएसबमोजिम वित्तीय विवरण
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त...
सेवाग्राहीका समस्या र जिज्ञासा सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले
काठमाण्डौ । कोरोनाको दोस्रो लहरबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा...
बैंकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन, 'वर्क
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फेस...
गत वर्षको लकडाउनमा दिइएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइने, के–के
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको लकडाउनबाट प्रभावित...